Koonfur Galbee d oo Dorashadii Dib loo dhigay Mar Sadexaad – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Koonfur Galbee d oo Dorashadii Dib loo dhigay Mar Sadexaad
Allhadaaftimo December 1, 2018 December 1, 2018 Uncategorized
Labo jeer oo hore ayaa dib loo dhigay, waxaana xaalada Koofur Galbeed muuqataa mid allow sahal ah, marka loo eego xaaladaha ka jira Baydhabo.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa qoraal uu soo saaray waxaa uu ku sheegay in 19 bishan la qaban doono doorashada Madaxweynaha, iyagoo u sababeeyay howlaha baaxada leh, waqtiga ay heystaan iyo shaqooyinka qabyada ee u baahan in muddo cayiman gudaheed lagu qabto
Sidoo kale Guddiga ayaa sheegay in markii ay ogaadeen martida caalamiga ah iyo xubnaha goobjooga ka noqonaya doorashada aanay ku wada imaan karin waqtigii loogu tala galay.
Waxaa kaloo Guddiga ku sababeeyay dib u dhaca doorashada in aanay u dhameystirneyn qalabkii doorashada lagu qaban lahaa, sidaas Guddigu ku go’aansaday in doorshadii lagu waday inay dhacdo 5 december dib loo dhigay, lagana dhigay 19 bisha December.
Ugu dambeyn Guddiga ayaa raalli gelin ka bixiyay dib u dhaca ku yimid doorashada markii saddexaad.
Previous Madaxwayne Ku Xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici Oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Magalada London Ee Caasimada Uk.
Next Wasiirul dawlaha Ingiriiska u qaabilsan arrimaha horumarinta dalalka barwaaqo sooranka Harriet Baldwin, ayaa sheegtay in Ingiriisku Somaliland kala shaqeeyo arrimo badan